ခြေလှမ်းကျဲလာသည့် စစ်အုပ်စု၏ ရွေး ကောက်ပွဲစနစ် ပြောင်းလဲမည့် စီမံကိန်း | SAVE OUR COUNTRY | SAVE MYANMAR | RESPECT OUR VOTES | HONOR ELECTION RESULTS
ခြေလှမ်းကျဲလာသည့် စစ်အုပ်စု၏ ရွေး ကောက်ပွဲစနစ် ပြောင်းလဲမည့် စီမံကိန်း
စစ်တပ်နောက်ခံ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအစိုးရဦးဆောင်သည့် ကာလက လွှတ်တော်တွင်း ဆွေးနွေးမှု မပြီးပြတ်ခဲ့သည့် ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ပြောင်းလဲရေးကို အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီက အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် ဆက်တိုက်ဆိုသလို ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လာသည်။
မဲများသူအနိုင်ရသည့် ရွေးကောက်ပွဲစနစ် (First Past the Post – FPTP) ကို ဖျက်သိမ်းပြီး အချိုးကျကိုယ်စားပြုစနစ် (Proportional Representation – PR) ကို ပြောင်းလဲကျင့်သုံးနိုင်ရန် စစ်ကောင်စီက အသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်သည့် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ဖေဖော်ဝါရီလကတည်းကပင် ကြိုးပမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း ဦးသိန်းစိုးဦးဆောင်သည့် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ပြုလုပ်သည့် PR စနစ်ပြောင်းလဲရေးဆွေးနွေးပွဲသို့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီနှင့် မိတ်ဖက်ပါတီအများစုကသာ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ မေလတွင် ပါတီများနှင့် ထပ်တွေ့ခဲ့ပြန်သည်။ ထိုသို့ တွေ့ဆုံရာတွင် ကော်မရှင်က NLD ပါတီကို ဖျက်သိမ်းပြီး ခေါင်းဆောင်များကို အရေးယူမည်ဟု ကြုံးဝါးခဲ့သည်။
ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (SNDP) ဥက္ကဋ္ဌ စိုင်းအိုက်ပေါင်းက ၎င်းတို့ပါတီက ထိုဆွေးနွေးပွဲများသို့ တက်ရောက်ခဲ့သော်လည်း ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးခြင်းမရှိခဲ့ကြောင်း ပြောသည်။
“သူတို့က အဓိကတော့ PR System အကြောင်းကိုပဲ ပြောတာပဲ။ သူတို့က ဒီလကုန်လောက်ကျရင် ထပ်ခေါ်မယ် ထင်တယ်။ သူတို့ ရှင်းပြမှာပေါ့၊ ရှင်းမပြဘဲနဲ့ ကျွန်တော်တို့က လက်ခံမယ်၊ လက်မခံဘူးဆိုတာကို ပြောလို့ မရသေးဘူးလေ” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးခင်မောင်ဦးက PR စနစ်ကို အသုံးပြုရန် နိုင်ငံရေးပါတီအများစုက ထောက်ခံထားသည်ဟု စက်တင်ဘာ ၃၀ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။
“ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့က လုပ်မယ်ဆိုတာနဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို UEC ကနေပြီး ပါတီတွေနဲ့ ညှိနှိုင်းပြီး ထိုင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ ဆုံးဖြတ်ပြီဆိုတာနဲ့ လုပ်နိုင်အောင် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်၊ လက်စွဲ ဒါတွေကို အသေးစိတ်ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
PR စနစ်ကို ပြောင်းလဲကျင့်သုံးခြင်းမှာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ဆန့်ကျင်ခြင်းမရှိဟု ဦးခင်မောင်ဦးက ပြောသည်။ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမည့် နေ့ရက်နှင့် PR စနစ်ကို ထောက်ခံသည့် နိုင်ငံရေးပါတီအရေအတွက်ကိုမူ ၎င်းက ထုတ်ဖော်မပြောဆိုခဲ့ပေ။
ကော်မရှင်နှင့် တွေ့ခဲ့သည့် ပါတီများမှာ လူကြိုက်နည်းသည့်ပါတီများသာဖြစ်ပြီး အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကို ထောက်ခံသူများ၊ အာဏာသိမ်းမှုကို ကန့်ကွက်မှုမပြုခဲ့သည့် ပါတီများ ဖြစ်သည်။
သို့သော်လည်း မဲစာရင်းမှားသည်ဟု အကြောင်းပြပြီး အာဏာသိမ်းထားသည့် စစ်ခေါင်းဆောင်က အဆိုပါလူကြိုက်နည်းပါတီတို့မှ ခေါင်းဆောင်တချို့ကို စစ်ကောင်စီတွင် နေရာပေးထားသလို တချို့ကို ဝန်ကြီးနေရာများ ပေးထားသည်။
ပြီးခဲ့သော ရွေးကောက်ပွဲများတွင် အကြီးအကျယ်ရှုံးနိမ့်ခဲ့သော ထိုပါတီများက PR စနစ်ကို အကြီးအကျယ်ထောက်ခံနေကြသည်မှာ မထူးဆန်းပေ။
PR ဟု လူသိများသည့် အချိုးကျကိုယ်စားပြုစနစ်မှာ ပါတီတစ်ခုချင်းက ရရှိသည့် ဆန္ဒမဲအရေအတွက်အပေါ် မူတည်ပြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေရာကို ခွဲဝေကျင့်သုံးရသည့် ရွေးကောက်ပွဲစနစ်မျိုးဖြစ်သည်။
ထိုစနစ်ကို အသုံးပြုပါက တစ်ပါတီတည်းက ဦးဆောင်ပြီး အစိုးရဖွဲ့နိုင်သည်အထိ လူထုထောက်ခံမှုအားကောင်းသည့် NLD ပါတီ၏ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အရေအတွက်မှာ များစွာ လျော့နည်းသွားနိုင်သည်ဟု လေ့လာသူများက ယူဆကြသည်။
PR စနစ်ပြောင်းလဲရန်ကို ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က နိုင်ငံရေးပါတီများကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသကဲ့သို့ပင် အာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင်များကလည်း ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။
စစ်အာဏာသိမ်းပြီး ၆ လအကြာ ဩဂုတ် ၂၄ တွင် စစ်ခေါင်းဆောင် မင်းအောင်လှိုင်က လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ဆန္ဒကို အလေးထားနိုင်ရန်အတွက် PR စနစ်ကို ပြောင်းလဲကျင့်သုံးသွားမည်ဟု ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။
ထို့အတူ အောက်တိုဘာ ၉ က အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှု ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ (NSPNC) နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီအချို့ တွေ့ဆုံရာတွင်လည်း ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဝင်းဗိုလ်ရှိန်က PR စနစ်အကြောင်းကို အကျယ်တဝင့် ရှင်းပြခဲ့သည်ဟု BBC သတင်းဌာနက ဖော်ပြထားသည်။
ရွေးကောက်ပွဲများတွင် လူထုထောက်ခံမှု အများဆုံးရရှိခဲ့သည့် NLD ပါတီကို ထိုးနှက်ချက်ကြီးမားစေသည့် PR စနစ်ကို ပြောင်းလဲကျင့်သုံးရန် အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းတွင်မှ စစ်ကောင်စီက ကြိုးပမ်းခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပေ။
၂၀၁၄ နှစ်လယ်ပိုင်းတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီ (NDF) မှ ဒေါ်ခင်ဝိုင်းကြည်က PR စနစ်ပြောင်းလဲရန် အဆိုကို အမျိုးသားလွှတ်တော်တွင် တင်သွင်းခဲ့ရာ စစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုးအမတ်များနှင့် NDF အမတ်များ၏ ထောက်ခံမှုဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
သို့သော်လည်း ထိုစဉ်က လွှတ်တော်နိုင်ငံရေးထဲ ဝင်ခါစ NLD အမတ်များက PR စနစ်ပြောင်းလဲခြင်းမှာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် မညီညွတ်ဟုဆိုကာ အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးသို့ ကန့်ကွက်လွှာတင်သွင်းခဲ့ရာ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတွင် PR စနစ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် မအောင်မြင်ခဲ့ပေ။
NLD ပါတီဘက်က အခြေခံဥပဒေခုံရုံးသို့ တင်သွင်းသည့် ထိုကန့်ကွက်လွှာတွင် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသများကို ချန်လှပ်ပြီး အမျိုးသားလွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲများတွင် PR စနစ်ကို ကျင့်သုံးခြင်းမှာ ရွေးကောက်ပွဲ ပုံစံ ၂ မျိုး သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်နေ၍ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ညီညွတ်မှု ရှိမရှိ အဆုံးအဖြတ်ပေးရန် တောင်းဆိုထားခြင်းဖြစ်သည်။
အငြင်းပွားဖွယ်ရာဖြစ်ခဲ့သော PR စနစ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရေးမှာ ကော်မရှင်၊ ခုံရုံးတို့ကို ချုပ်ကိုင်ထားသည့် စစ်ကောင်စီအတွက် မခက်ခဲတော့ပေ။
ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးခင်မောင်ဦးက ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖြစ်သည့်အခါ စနစ် ၂ မျိုး တပြိုင်နက် ကျင့်သုံးမည်ဟု ဆိုသည်။
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ၆ ခုနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု မဲဆန္ဒနယ်မြေ ၂၉ နေရာတွင်တော့ မူလကျင့်သုံးခဲ့သည့် ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ဖြစ်သည့် မဲများသူအနိုင်ရရှိသည့် FPTP စနစ်ကိုသာ ဆက်လက်ကျင့်သုံးသွားမည်ဖြစ်သည်ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
“PR စနစ်ကို ကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာလည်း ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေနဲ့ အညီပဲ၊ ကိုယ်စားလှယ်အရေအတွက်တွေက မပြောင်းလဲပါဘူး၊ သတ်မှတ်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အရေအတွက်အတိုင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောသည်။
PR စနစ်ကို တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီကြီးများက ပထမအကြိမ်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးကာလက ငြင်းပယ်ထားခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
ဇိုမီးဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ပူဂင်ကမ်းလျန်က PR စနစ်ပြောင်းလဲရန်ကို ပထမအကြိမ်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးကတည်းက ၎င်းတို့ပါတီက ကန့်ကွက်ခဲ့ကြောင်း၊ မြန်မာစာတတ်မြောက်မှုအားနည်းသည့် ချင်းပြည်နယ်တွင် အခက်အခဲရှိနိုင်သည်ဟု ယူဆကြောင်း ပြောသည်။
အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီက PR စနစ်ကျင့်သုံးရန် ထပ်မံကြိုးပမ်းလာခြင်းကို စည်းလုံးညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ မဟာမိတ်အဖွဲ့ (UNA) ၏ သဘောထားဖြင့်သာ တုံ့ပြန်ဆုံးဖြတ်သွားမည်ဖြစ်သည်ဟု ပူဂင်ကမ်းလျန်က ပြောသည်။
“ UNA ရဲ့ သဘောထားပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ဆုံးဖြတ်ရမှာပေါ့။ ပြီးတော့ NLD က ဘယ်လိုလာဦးမလဲတော့ ပြောလို့ မရဘူးလေ။ ၂၀၁၀ တုန်းက NLD အပါအဝင် ကျွန်တော်တို့ Boycott လုပ်မယ် (သပိတ်မှောက်မယ်) ဆိုပြီးတော့ သဘောတူထားတယ်။ ၂၀၁၂ ရောက်တော့ သူတို့က ကြားဖြတ်ဝင်မယ်ဆိုလည်း ကျွန်တော်တို့က ထောက်ခံလိုက်ရတာကိုး။ ခုလည်း ဘယ်လိုလာဦးမလဲမသိဘူး။ မှန်းဆလို့ မရဘူး” ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
NLD ၏ မိတ်ဖက်ဖြစ်သည့် UNA မှာ စည်းလုံးညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (UNLA) ကို NLD ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ခဲ့သည့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် အမည်ပြောင်းလဲထားခြင်းဖြစ်သည်။
PR စနစ်ကျင့်သုံးရေးကို ပထမအကြိမ်လွှတ်တော်ကာလကတည်းက ကန့်ကွက်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ဟု SNDP ပါတီက ပြောသည်။
“အဲဒီတုန်းကတော့ ကျွန်တော်တို့ကတော့ ကန့်ကွက်တယ်လေ၊ ကျွန်တော်တို့က နားမလည်သေးဘူး။ ခုကတော့ ပြောဖို့ အခြေအနေမပေးသေးဘူးလေ။ ဘယ်လိုအခြေအနေလာမလဲဆိုတာက ကိုယ်ကလဲ ဒီဟာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ စိမ်းနေသေးတယ်” ဟု SNDP ဥက္ကဋ္ဌ စိုင်းအိုက်ပေါင်းက မယုတ်မလွန်မှတ်ချက်ပြုသည်။
ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (SNLD) ရွေးကောက်ပွဲ သပိတ်မှောက်ခဲ့သည့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါတီခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သူ စိုင်းအိုက်ပေါင်းက SNDP ကို တည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ (ANP) မှ နုတ်ထွက်ထားသူ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်း ဦးအောင်ကျော်ဇံက PR စနစ်မှာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် အံဝင်ခွင်ကျမရှိ၍ ကျင့်သုံးရန် ခက်ခဲနေပြီး ပြည်သူလူထုဆန္ဒနှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ သဘောဆန္ဒအရ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီးမှသာ ဆောင်ရွက်သင့်သည်ဟု ဩဂုတ်လက Myanmar Now ကို ဖြေကြားခဲ့သည်။
“၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံက PR စနစ်အတွက် လုပ်ထားတာ မဟုတ်ဘူး။ FPTP ဆိုတဲ့ ရသူအကုန်ယူဆိုတဲ့ စနစ်အတွက် လုပ်ထားတာဖြစ်တာကြောင့် ဒါကိုဖျက်ပြီးမှ ပြန်ပြင်ရမလား၊ ဒီနေရာမှာ အစားထိုးရမလားဆိုတာ မသဲကွဲဘူး” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
စစ်ကောင်စီ စိတ်ကြိုက် ရွေးကောက်ပွဲ
စစ်ကောင်စီ၏ ဝါဒဖြန့်သတင်းစာများတွင် PR စနစ်နှင့် ပတ်သက်သည့် ဝါဒဖြန့်ချိရေးဆောင်းပါးများကို ဇွန်လအစောပိုင်းကတည်းကပင် ဆက်တိုက်ဖော်ပြခဲ့သည်။ နိုင်ငံပေါင်း ၁၈ နိုင်ငံရှိ ရွေးကောက်ပွဲစနစ်များအကြောင်း ဆောင်းပါးများကို စုစည်းပြီး “ ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာ လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲများအပေါ် လေ့လာခြင်း အတွဲ (၁)” စာအုပ်ကို ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က အောက်တိုဘာ ၄ တွင် ထုတ်ဝေရောင်းချခဲ့သည်။
လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲတွင် အချိုးကျကိုယ်စားပြုစနစ် (PR) ကို ကျင့်သုံးပါက မည်သည့် (PR) စနစ်ကို ကျင့်သုံးသင့်ပါသလဲ? ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ကိုက်ညီမည့် မည်သည့်ရွေးကောက်ပွဲစနစ်မျိုးကို ကျင့်သုံးသင့်ပါသလဲ? စသည့် မေးခွန်းများအတွက် လေ့လာအဖြေရှာရန် စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ဖြစ်သည်ဟုလည်း ကြော်ငြာခဲ့သည်။
ထို့ပြင် လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလောင်းများ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ မရှိမဖြစ် ဆောင်ထားသင့်သည့် စာအုပ်ဖြစ်သည်ဟုလည်း ဖော်ပြထားသည်။
စစ်ကောင်စီနှင့် ၎င်း၏ ဘက်တော်သားတို့က အကြီးအကျယ်လှုံ့ဆော်နေသော ရွေးကောက်ပွဲနောက်တစ်ခုနှင့် PR စနစ်ပြောင်းလဲရေးအစီအစဉ်ကို ကိုဗစ်၊ အာဏာသိမ်းတပ်တို့၏ နှိပ်စက်မှု၊ စီးပွားပျက်မှုတို့ကြောင့် သောကရောက်နေသည့် ပြည်သူအများအပြားက စိတ်ဝင်စားမှု နည်းနေသည်။
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ လက်နက်ကိုင်အန်တုနေသူများကလည်း အထူးတလည် စိတ်ဝင်စားဟန်မပြကြဘဲ အာဏာဖီဆန်ရေး၊ စစ်ကောင်စီဖျက်သိမ်းရေးကိုသာ ပိုမို အာရုံစိုက် လုပ်ဆောင်နေကြသည်။
ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်သည့် New Myanmar Foundation တည်ထောင်သူတစ်ဦးက နိုင်ငံတကာဖိအားရင်ဆိုင်နေရသည့် စစ်ကောင်စီသည် ၎င်းတို့ စိတ်တိုင်းကျဖြစ်မည့် ရွေးကောက်ပွဲတစ်ရပ်ကို အမြန်ဆုံးကျင်းပသွားနိုင်ရန် ပြင်ဆင်နေခြင်းဖြစ်ပြီး ထိုရွေးကောက်ပွဲတွင် PR စနစ်ကို အသုံးပြုသွားနိုင်ခြေရှိသည်ဟု သုံးသပ်သည်။
“ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်မယ့်ရက်ကိုလည်း ကြေညာမယ်ပေါ့်နော်။ PR ကိုလည်း သုံးမယ်။ PR နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ဆွေးနွေးမယ်ဆိုပြီးတော့ ကျွန်မတို့ ကြားထားပါတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
PR စနစ်ကို အသုံးပြုသင့်၊ မသင့်မှာ အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီက ဆုံးဖြတ်ရမည့် ကိစ္စမဟုတ်ဘဲ လူထုက ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသည့် အရပ်သားအစိုးရနှင့် သီးခြားလွတ်လပ်သည့် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး အဖြေရှာရမည့် ကိစ္စသာဖြစ်သည်ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
“သူတို့ကို အာဆီယံကလည်း ဖိအားပေးလာတဲ့ သဘောမျိုးရှိတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲပြန်ကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ သူတို့က မဲစာရင်းဘာညာကို အကြောင်းပြုပြီး အာဏာသိမ်းခဲ့တာ ဆိုတော့လေ။ (ရွေးကောက်ပွဲ) အဲဒါကို အမြန်ဆုံးတော့ သူတို့ လုပ်သွားမယ်လို့ ထင်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောလိုက်သည်။ myanmar now